Iflethi okanye indlu ekwicomplex eDak - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex eDak
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguAdja
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uAdja iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Apartment ifakwe kakuhle ngezixhobo ezisemgangathweni eziza kwenza ukuhlala kwakho kube mnandi. Isixeko esizolileyo nesikhuselekileyo, ukufikelela kwiteksi kunye neevenkile kunye kufuphi ne-VDN ukufikelela kwisixeko kunye ne-Almadie kunye ne-bceao beaches. Akukho ngxolo yasebusuku ukuze ungaphazamisi abamelwane kunye nokuxinana kwendlu. Ayibonelelwanga kwikhontrakthi yokubhukisha. Nceda uhloniphe. Ukutshajwa kombane emva kokuphela kwentlawulo yokuqala.
I-Apartment ifakwe kakuhle ngezixhobo ezisemgangathweni eziza kwenza ukuhlala kwakho. Kwisixeko esizolileyo nesikhuselekileyo, esifumaneka ngeteksi kunye neevenkile, kufutshane ne-VDN ukufikelela kwisixeko. Kufuphi neAlmadie kunye neelwandle zasebceao. Isixeko simi phakathi kweendawo zokuhlala ezinjengomantyi, iAtaya kunye neSonatel. Indawo entle kwaye ikufuphi kakhulu neVdn
4.82 · Izimvo eziyi-45
indawo yokuhlala izolile kwaye ikhuselekile. Ipaki enkulu, indawo yokuzivocavoca, iivenkile ezigcweleyo, izithuthi eziteksi ezilula, iindawo zokutyela ezingaphezulu kwe-4, ene-ice cream parlor, ipizerria, ukutya okukhawulezayo nokunye.
Umbuki zindwendwe ngu- Adja
ESenegal, ilizwe laseTeranga, siyayazi indlela yokwamkela abantu ngoncumo. Iiholide zokufunyanwa, ukuphumla, izifundo, iinkomfa ..., uya kufumana ulonwabo lwakho kule ndawo ezolileyo nekhuselekileyo apho umqhubi weteksi ochanekileyo uya kuba nakho kuhambo lwakho ngexabiso lohambo. I-dibiterie ikumgangatho ophantsi. indawo yokutyela yeGourmandiz (i-ice cream parlor, igumbi eline-air-conditioning, ukutya okukhawulezayo, i-pizzeria kunye nazo zonke ii-odolo), indawo yokubhaka kunye nezinye iindawo zokutyela apho ungadla khona ukusuka kusasa ukuya ebusuku. Iivenkile ezigcweleyo zijikeleze isakhiwo kunye nepaki enkulu eluhlaza apho unokuhambahamba khona ukutshona kwelanga.
ESenegal, ilizwe laseTeranga, siyayazi indlela yokwamkela abantu ngoncumo. Iiholide zokufunyanwa, ukuphumla, izifundo, iinkomfa ..., uya kufumana ulonwabo lwakho kule ndawo ezolile…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dakar